Atụmatụ Azụmaahịa Obodo maka Azụmaahịa Niile Ebe | Martech Zone
Na-arụ ọrụ nke ọma azụmahịa ọtụtụ ebe dị mfe… mana naanị mgbe inwere ikike local atụmatụ ahia! Taa, azụmaahịa na akara nwere ohere ịbawanye nnweta ha gafere ndị ahịa ime obodo site na ịme ntanye. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ika ma ọ bụ onye azụmaahịa na United States (ma ọ bụ obodo ọ bụla ọzọ) nwere atụmatụ ziri ezi ị nwere ike ịbupụrụ ndị ahịa gị ngwaahịa na ọrụ gị n'ofe ụwa.
Cheedị banyere azụmaahịa ọtụtụ ebe dị ka ebe a na-enwu ọkụ ebe ị nwere otu nnukwu ụlọ (ma ọ bụ ọkụ ọkụ) na ọtụtụ ụlọ ahịa azụmaahịa jikọrọ ọnụ. Iji usoro a, ọ na-adị mfe iru onye ahịa ahụ kpọmkwem ebe ha bi.
Kedu ka esi ejikwa azụmahịa dị iche iche na-ejighị ndị otu gị ọkụ?
haziri - Iji nọgide na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, nkwụsị ndị ọrụ, na arịrịọ ndị ahịa, ịkwesịrị iji usoro ahazi. Kwesịrị ịhazi usoro eji arụ ọrụ ọ bụghị naanị otu ebe - kama ọ bụ ebe azụmahịa gị niile.
Njikwa (S) na-egbu - I wulitela ọrụ siri ike onye nwere ike ma ọ bụ megharia azụmahịa ọtụtụ ebe ma ọ bụ mebie ya. Ọ dị mkpa iwepụta oge iji were ndị njikwa nwere nghọta iji hụ na ụlọ ahịa gị na-agba ọsọ n'ụzọ ịchọrọ. Eledala ikike nke ezi njikwa anya.
Communication - Igodo nke ijizi ọnọdụ, ịgbasa ọhụụ azụmahịa gị, yana ịkekọrịta uru yana ndị ahịa bụ nkwukọrịta. Iji nọgide na-enwe njikọ ị nwere ike leverage nzukọ ime obodo, nzukọ kwa izu, yana mbugharị oku. Nzukọ a na-enwe mgbe niile na nke dị mkpa nwere ike inyere aka idobe ihe na ndozi.
Ihe kachasị mkpa - tọ mkpa ụzọ dị ka ngwụcha 50% nke ọrụ niile. Dabere na nyocha, azụmahịa dị iche iche na-etinye ihe ruru awa 18 n'izu n'izu na ịkọwapụta nkwukọrịta.
Njikọ - O nweghị onye n’ime anyị siri ike karịa anyị niile. Nke ahụ bụ okwu magburu onwe ya na ọ nwere ike ịbụ motto gị, kwa! Mgbe ị na-azụ ahịa ọtụtụ ebe, ihe na-adị mfe mgbe onye ọ bụla maara ọrụ ya na ọrụ ya. Nwee otu mmụọ siri ike site n’ịkụnye ụkpụrụ.
Nọgidenụ na-Ọ Dị Mfe - Jiri teknụzụ ziri ezi, tinye ihe ndị dị n'ịntanetị, ma mee ka arụmọrụ gị dị mfe. Nwere ike ịchekwa ọtụtụ oge, ike, na akụrụngwa mgbe ị nwere maapụ mara mma doro anya.
Ihe ịma aka nke azụmahịa dị iche iche
Ga ebe dị iche iche siri ike. Ọ dị mfe ilelị ihe ndị dị mkpa maka ọrụ na ọrụ na azụmahịa ọtụtụ ebe. Ọzọkwa, enweghị ike ịkwadebe usoro azụmaahịa na atụmatụ azụmaahịa maka mgbasawanye nwekwara ike imetụta arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ na-adịghị mma. Fọdụ nsogbu ịma aka ndị ahịa na ụdị dị iche iche na-eche ihu bụ:
njikọ aka - Mkpebi azụmahịa a na-achịkwaghị achịkwa na mmekọrịta a na-ahazighị ahazi nwere ike ịdaba na azụmaahịa a. Ọ bụrụ na onye njikwa gị anaghị enye otu nsogbu ahụ ka ị na-eme, o yikarịrị ka onye ọrụ gị ga-amalite ịhapụ ohere.
Agbụrụ Na azụmaahịa ọtụtụ ebe, ọ nwere ike isiri gị ike ịkekọrịta foto ka ukwuu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enweghị ike ịnwe njikọta n'etiti ndị otu na ụlọ ọrụ. Ka oge na-aga, otu ala ahụ ghọrọ ebe agbụrụ agbụrụ; ị nwere ike iche na enwere otu ndị na-arụ ọrụ n'ọfịs. Ma, n'eziokwu, enwere ike ịnwe obere otu egwuregwu anọ na ise. Debe onye ọ bụla n'otu ibe ma ọ bụ na ọ nwere ike iduga nbibi nke akụ bara uru.
Performance - Otu n’ime mgbochi maka azụmahịa ọtụtụ ebe bụ ihe doro anya banyere etu esi arụ ọrụ ahụ! Ebe ọ bụ na ndị ọrụ anaghị ahụ anya, nlekọta ahụ nwere ike ịma aka. Enweghi mkpali mgbe niile, nkwukọrịta, yana mmekọrịta onye ọrụ nwere ike ịda.
Ọ bụ ezie na ị na-agba ọtụtụ ebe nwere ike iyi ihe dị egwu, ọ ga-ekwe omume ịga nke ọma. Nwere ike ịmepụta usoro ịzụ ahịa mpaghara yana ịgbaso ọnọdụ nke ọ bụla na-aga nke ọma. Enwere otutu nyiwe nke emebere iji jikwaa oru ahia di otutu, ahia, na ahia ahia - gbaa mbọ ime ihe omume ụlọ gị iji hụ na ha kwadoro, mkpokọta ma mekwaa usoro ị na-eme n'ofe ọnọdụ.
N'isiokwu a, aga m ekerịta ụfọdụ usoro ị ga - eme iji chịkwaa azụmaahịa azụmaahịa gị ọtụtụ ebe.
Zọ ahia iri nke mpaghara iji were ụlọ ọrụ gị nwere ọtụtụ ebe gaa n'ọkwa ọzọ
Ntughari akwukwo - Ma ọ bụ data gbasara omume ndị ahịa, ọrụ, na ojiji nke nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta - site na ịtụgharị na nchịkọta data ị nwere ike iwepụta geolocation iji wulite nghọta dị irè. Site na itinye aka na atụmanya gị na ndị ahịa gị, ị ga - eme ka ego gị niile nweta. Ọzọkwa, ịnwere ike iji otu ụzọ azụmaahịa mpaghara ahụ wee chọpụta ndị ahịa na ndị ọzọ ahịa obodo.
Ihe omume mpaghara - Site na ịhazi ihe omume mpaghara ị nwere ike ịgba ndị ahịa ume itinye aka na akara gị. Ihe omume mpaghara bụ ụzọ dị mma ọ bụghị naanị ịkwalite azụmahịa gị, kamakwa mepee ohere ịme ihe ọma maka obodo.
Nyocha banyere ntanetị - Nyocha na-agbanwe maka azụmaahịa mpaghara. Ọbụna nyocha na-adịghị mma na-ekere òkè na nhazi akara. Otu esi azaghachi nyocha na-ezighi ezi nwere ike inyere gị aka ịgbanwe onye nwere ike ịbụ onye ahịa na-akwụ ụgwọ.
97% nke ndị na-eri ihe bu ụzọ gụọ nyocha nke ntanetị banyere ngwaahịa na ọrụ ahụ tupu ịtụ iwu. Ihe dị ka 80% nke ndị mmadụ tụkwasịrị obi nyochaa na ntanetị site n'aka ndị ahịa gara aga.
Nchịkwa nchịkwa - Taa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aghọta mkpa ọ dị ijikwa aha ha n'ịntanetị. Ihe ntanetị mgbasa ozi dịka Facebook, LinkedIn, na Instagram na-enyere ndị azụmaahịa aka ịbanye na ndị ahịa bara uru. Njikọ dị n'etiti ika na onye ahịa na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịme ka ihe kachasị mma maka otu ebe dị.
email Marketing - Email marketing na-aga n'ihu na-abụ ihe kachasị dị irè ahịa ahịa mpaghara. Ndị nnukwu ụdị na-akwado ya maka azụmaahịa ndị pere mpe. Mgbasa ozi email dị irè nwere ike iwusi ike gị / ọnọdụ azụmahịa gị n'ahịa. Ọzọkwa, ịre ahịa email na-enyekwa ohere iji nyefee ndị ahịa dị ọrụ ndị ahaziri.
Ederede Ozi ederede - Ọwa ahịa SMS na-eto eto na ọnụego mara mma na azụmaahịa mpaghara na-eduga mkpọ njikọ. Onweghi ihe dị ka ozi n’oge n’ekwentị gị ịdọrọ uche gị gaa na enyemaka ma ọ bụ iwetulata ego nke obodo.
E jiri ya tụnyere 2016, 23% karịa mmadụ ga-ahọrọ iji nweta ozi SMS sitere na ụlọ ọrụ na 2020. A na-agụ 82% nke ozi ederede n'ime nkeji 5, mana ndị ahịa na-emeghe 1 na 4 ozi ịntanetị ha natara.
Akwụkwọ ndekọ mpaghara - Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere akwụkwọ ndekọ ntụkwasị obi ha na-achọ maka azụmaahịa na ya. Ma ọ bụ nyocha nke Yelp, Google Maps, CitySearch, ma ọ bụ ọrụ ọzọ, idebe ọnọdụ azụmahịa gị na nọmba ekwentị gị ga-eme ka ndị ahịa gị ahịa gị.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - intanọgide na-enwe ebe nrụọrụ weebụ dị ngwa, na-agagharị agagharị na-ejikọ mpaghara na akara ngosi ị na-eje ozi na ọnọdụ nke ọ bụla ga-eme ka ndị ọrụ nyocha ihe na-achọ ngwaahịa na ọrụ gị. Tinye ego na ikpo okwu nke nwere ike inyere gị aka nyochaa ọkwa ọchụchọ mpaghara gị maka ọnọdụ gị ọ bụla.
Social Media - nọgide na-enwe a ezubere iche ọnụ na-ewu a obodo na-esonụ na-elekọta mmadụ media nwere ike ụgbọala obodo okporo ụzọ gị azụmahịa. Jiri ohere niile na usoro nke mgbasa ozi mgbasa ozi mee ihe - site na tweets, hashtags, vidiyo, foto na akụkọ!
Advocacy - Nye ndenye ego nkwụnye ego ma jide n’aka na gị na ndị otu mpaghara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga - enyere aka ịchụpụ okwu ọnụ (NWANYI) marketingre ahịa gị. Onweghị ihe a tụkwasịrị obi karịa ntụpọ onye otu ọ bụla gbasara azụmaahịa mpaghara.
Ma, n'ezie, ị nwere ike ịrata ndị ahịa gị dị ugbu a site na ịnyefe onyinye dị mkpa, nke ahaziri iche, na nke mpaghara. Ulo ahia dijitalụ di nma n’inyere gi aka ibula ndi ahia ozo.
Iji na-agba ọsọ azụmahịa ọtụtụ ebe ịkwesịrị ịzụlite nkà na-akpali akpali ma mụta otu esi emekwu obere oge. Enwere m olileanya na ndụmọdụ ndị a nyere gị ụfọdụ ntụziaka!
Tags: ntinyeemail Marketinggeotargeted mgbasa ozigeotargetingnyocha googleakwụkwọ ndekọ aha mpagharaihe omume mpagharaahia obodonchọta mpagharaobodo seoọtụtụ-ọnọdụazụmahịa ọtụtụ ebeNyocha banyere ntanetịnjikwa ahaASMS ahịaelekọta mmadụ mediaederede ederede ahia